ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးဝင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသံအမတ်ကြီးများဖြစ်ကြသော ဗီယက်နမ်နိုင်ငံနှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးတို့အား သီးခြားစီ လက်ခံတွေ့ဆုံ | Ministry of Planning, Finance and Industry
Posted By : editor, Date : 03.04.20190comment
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးဝင်းသည် ယနေ့ နံနက် ၁၀:၀၀ အချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Dr. Luan Thuy Duong အား လည်းကောင်း၊ ၁၁:၃၀ အချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Daniel Patrick Chugg အား လည်းကောင်း စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၂၆)၌ သီးခြားစီ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ထို့သို့ တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာ-ဗီယက်နမ် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ကိစ္စ ရပ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အခြေ အနေများ၊ အခွန်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာန (Department of International Development-DFID) ၏ မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ကူညီထောက်ပံ့ပေးမှု အခြေအနေများ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် စီမံကိန်းဘဏ် (Project Bank) ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဆက်အောင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ (သတင်းစဉ်)